We Fight We Win. -- " More than Media ": “နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ မလွတ်သေးသမျှ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင် အပါအ၀င် ဘာရုပ်ရှင်မှ မရိုက်ကူး မပါဝင်လိုတော့ပါ” (ဇာဂနာ)
peacefull transaction road to democracy in Burma?????????????
except Arab spring style only last option.
Le Quan YU said.......
like talking with dead man only.
god bless Burma.
ခင်ဗျာတို့မှာလဲ အမျိုးမျိုးပါပဲလား။ တနေ့ကို တမျိုးပြောင်းလဲနေတယ်။
အမည်မသိကောင်ကများ never never နဲ့ ရှောက်ပြောနေရသေးတယ်။ တော်ကြာသမ္မတကြီးက လူကုန်လွှတ်ပေးလိုက်ရင်ကော နင့် Infomation ပေးမှာကြနေတာပဲ. အလကား ဘေးထိုင်ဘုပြောမယ့်သူတွေ.
အမည်မသိတာချင်း တူဦးတော့ ငါကနင့်ထက်သာလောက်သေးတယ်။
ကိုဇာကနာ ကလည်းမိုက်ပါ့.. မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်က ဆိုမာလီဓါးပြရှိရမှာတုံး...ယုန်ရုပ်ရေးပြလဲမယုံရဲပါဘူး. သူတို့တွေက ဟို.. ဆိုမာလီမှာပဲနေ နေကြမှာပေါ့..
ဦးသန်းရွှေကပဲ သူတို့တွေကို VISA ပေးပြီး မြန်မာပြည်ထဲ သွင်းထားသလိုလိုနဲ့..ဟုတ်လည်း မဟုတ်ပဲနဲ့များ..အဲဒီ ကိုသူရကြီးကလည်း တစ်မျိုး...
5 January 2012 at 01:28